प्रधानमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी : राष्ट्रपति कसको पक्षमा ? - Kantipath.com
प्रधानमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी : राष्ट्रपति कसको पक्षमा ?
दावी पत्रमा जसपाको तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो र एमालेका अध्यक्ष एवम् दलका नेता केपी शर्मा ओलीकाे हस्ताक्षर रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दै विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित शीलतनिवासमा छन् ।
चार पक्षका १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित उनीहरु अहिले राष्ट्रपति कार्यालय गएका हुन्। देउवासँग माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई, र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायत नेताहरु शीतल निवास पुगेका छन्।
Previous Previous post: प्रधानमन्त्रीमा खड्क प्रसाद ओलीको पनि दाबी
Next Next post: हस्ताक्षर दर्ता गरेर शितल निवासबाट निस्किए विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु